Minisitra vaovao telo no nampidirina : Nohatsaraina ny governemanta Mahafaly Olivier -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra vaovao telo no nampidirina : Nohatsaraina ny governemanta Mahafaly Olivier
Miisa telo ireo minisitra vaovao nampidirina ao anatin’ny governemantan’ny Mahafaly Olivier Solonandrasana. Henry Rabary-Njaka no hisahana ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Efa talen’ny kabinetran’ny fiadidiana ny repoblika izy ary efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Air Madagasikara. Izy koa no sekretera jeneralin’ny antoko Hvm. Izy no nisolo ny minisitra Atallah Béatrice, nisahana io ministera io teo aloha.
Ramatoa Rasolo Elise Alexandrine kosa no hitantana ny minisiteran’ny Fitsarana manomboka izao. Nanomboka ny volana marsa 2016 teo dia izy no filohan’ny fitsarana fandravana didy teo anivon’ny Fitsarana tampony. Izy araka izany no nandimby an’Andriamiseza Charles minisitry ny Fitsarana teo aloha.
Isan’ny minisitra vaovao ao anatin’izao governemanta Mahafaly Olivier izao i Beboarimisa Ralava, izay hisahana ny minisiteran’ny Fitaterana. Efa minisitry ny Tontolo iainana teo aloha ny tenany. Izy araka izany no nandray ny toeran’ny minisitry ny Fitaterana teo aloha.
Isan’ireo minisitra nisaorana tamin’ity fanovana governemanta amin’ny ampahany ity koa Narson Rafidimanana. Noraisin’ny minisitra Benjamina Ramanantsoa ny toerany. Izy indray araka izany no hitantana ny minisitera misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Ny minisiteran’ny Fitaterana moa no nosahaniny teo aloha.
Nisy koa ny famindrana toerana ho an’ireo minisitra sasantsasany. Lasa notazomin’i Tazafy Armand indray ny minisitry ny Indostria raha toa ka ny minisitry ny Varotra no nosahaniny teo aloha. Manomboka izao kosa indray dia i Nourdine Chabani, izay minisitry ny Indostria teo aloha no handray an-tanana ny minisiteran’ny Varotra.
Ny ankoatra izay kosa dia mijanona amin’ny toerany avokoa. Fomba fanao amin’ny tany demokratika moa ny fanovana ny mpikambana ny governemanta toa izao. Olona efa manana traikefa ary teknisianina avokoa izy ireo. Hita taratra araka izany ny maha fanovana governemanta teknisianina an’ity indray mitoraka ity.